Intelligence Prime Capital ama ipc waa tuugo dadka dhacda wana ponzi scam – Kiribto Somali Media
By sayid cali maxamed calasow
Breaking, Dhaqalaha Dunida, Wararka Lacagaha Kiribto
Maalin walba waxan aragnaa in hantidii soomaaliyeed qalin furato ama scamers. Ay dhacaan waxayna soomaalidu ku dhumisay suuqyada online.ka boqolal milyan oo dollar.
Baaritaan ay sameysay kiribto somali media waxan soo helnay qaybo ka mid ah shabakadaha ka shaqeysta multi-level marketing ama mlm. Noqdeen hormuudka in hantida soomaaliyeed qalin furatada gudaha internetka jooga dhacaan iyagane waxoogaa barsanteej.ah ay ka helaan goobaha ay hantidaas geynayaan malin walbane usoo gudbiyaan mid cusub, marka kii hore hawada uu ka baxo, waxan soo kordhay oraah cusub oo horey aan soomaalida loogu aqoon oo ah wax yar an ku tijaabinayaa taas oo kaliftay in malayiin soomaaliyeed sidaa lacagtoodii ku wayaan oo hal god uu mas kawada qaniino.
Cadeymaha iyo sababta waxan oo dhan ay u dhacayan waxan ku soo bandhigeynaa muqaalkan halkan ka daawo
Intelligence Prime Capital ama ipc waa tuugo dadka dhacda wana scamers qolada faafisane waala mid
Hoos U dhaca Bitcoin Ku Dhawaad $1,000 iyo S&P 500 Oo iyane Hoos U dhacday 4.5% Maxay Tahay Waxa Indho’Indheeyayaashu